Obi Tattoos Archives - Atụmatụ Echiche Tattoos
Tag: Obi mkpado
Mkpụrụ obi maka ụmụ nwanyị
Akwara obi na-anọchite anya ọtụtụ ihe. Ogbugbu obi na egosiputa ihe nile site na ihunanya ịhụnanya, mmasi na iru uju na ihe mgbu. Ụfọdụ ebe ebe egbugbu egbugbu kachasị ewu ewu bụ na nkwojiaka, ọkpụkpụ, hip na ụkwụ. Ndị di na nwunye na-emekarị ka aha ha banye n'ime ya. Lelee ...
Mkpụrụ Obi Echere Maka Ụmụaka
1. Mkpụrụ obi na ogwe aka dị elu na ejiji ink ọchịchịrị na-eme ka nwa agbọghọ na-ele anya Ụdị obi a na mkpịsị nkịkị ojii nke dị n'elu ogwe aka nke nwa agbọghọ na-enye 2 dị egwu. Mkpụrụ obi na bicep na-enye ụmụ agbọghọ a ...
Ihe kacha mma 24 na-eche echiche maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị
Anyị maara na obi na-anọchi anya ịhụnanya. Ka a sịkwa ihe mere anyị ji ahụ ndị mmadụ iji egbugbu egbugbu iji gosipụta mmetụta na mmetụta.
aka akannụnụAnkle Tattoosegbu egbu mmirizodiac akara akararip tattoosegbu egbuNtuba ntughariEgwu ugoegbugbu egbugbuegbu egbu ebighi ebimehndi imeweaka akaọnwa tattoosudara okooko osisiagbụrụ eboụkwụ akadi na nwunyearịlịka arịlịkaGeometric Tattoosima ima mmamma tattoosegbu egbu hennaechiche egbugbuakwara obienyi kacha mma enyiỤdị ekpomkpangwusi pusiegbu egbu diamondaka mma akaọdụm ọdụmegbu egbu maka ụmụ nwokeakpị akpịna-egbu egbundị na-egbuke egbukeUche obiakara ntụpọenyí egbu egbuegwu egwuna-adọ aka mmaokpueze okpuezeazụ azụkoi ika tattooegbu egbu osisi lotusndị mmụọ oziegbu egbu okpuụmụnne mgbun'olu oluegbugbu maka ụmụ agbọghọegbu egbu egbu